Nanonofy aho, Lasan'ny Shinoa, hono, ny...
2016-09-25 @ 22:24 in Ankapobeny
Raha misy indray izao ny resaka malaza dia izao Shinoa, Shinoa izao foana. Shinoamahamanina, hono, fa tsy Soamahamanina, sao diso famaky ka hoe Shinoamahamahana indray na Shinoamahimahina no voavaky... Rehefa mahita Shinoa dia mahana na mahina avy hatrany, mailo avy hatrany. Alefa daholo ity tsaho sy fanaratsiana Shinoa ity. Dia misy tsy menatra miteny fa Shinoa no tao ambadiky ny fandoroana ny rovan'Ambohidratrimo satria te-hividy iny tany iny, hono, ny Shinoa sasantsasany. Izany ka rediredy.
Miresaka rova ihany fa dia nisy gazety iray namoaka fa misy ampahan-tany ao amin'ny faritry ny Rovan'Ilafy, hono, nisy nividy. Vahiny, hono, ilay nividy; dia raha vao manoratra fotsiny hoe 'vahiny' dia lasa avy hatrany ianareo mieritreritra hoe: "Shinoa indray izay!" Tahaka ny tsy misy vahiny afa-tsy Shinoa eto Madagasikara. Efa misy moa ny mahasahy miteny fa rehefa kelikely dia ny Shinoa indray no hampanofa ny tany amin'ny Malagasy eto Madagasikara. Dia efa lasa lavitra loatra ry zareo ity fankahalanareo Shinoa ity. Manjary mampanonofy ratsy ka any anaty nofy avy no manonofy Shinoa.
Nofy ve moa hita hotantaraina fa aleo ihany ampitaina, fa misy finoana izay manko milaza hoe raha tantaraina, hono, ny nofy iray dia lasa tsy tanteraka, fa raha tsy tantaraina dia mety ho tanteraka. Nanonofy, hono, aho fa ny namindrana ity "tobim-piantsoanan'Ambodivona ity mankeny amin'ny tany malalak'Andohatapenaka lasan'ny Frantsay "Total Madagascar" ity, anie, hono dia satria efa voavidin'ny Shinoa koa ny ampahany be amin'io Ambodivona io. Tsy maintsy itadiavana, hono, noho izany ny hamindrana ireo fiara fitaterana maro dia maro miantsona sy ireo mpivarotra isan-karazany mameno azy ka ny vahaolana haingana indrindra dia ny tany eny Andohatapenaka. Izany, hono, no nahatonga an-dRavalomanana Marc hampitandrina ny Shinoa...
Dia nofy tokoa moa izany, soa fa toa Karana no tompon'ilay tany eny amin'ny Fasan'ny Karana fa tsy Shinoa. Soa fa Frantsay avy amin'ny Total no nampiandraiketana ny fanamboarana ny tobim-pitaterana nasionaly etsy Andohatapenaka na dia Shinoa aza no manao ilay lalana ao ambadika. Soa fa Malagasy, malaza mpanankarena sady mpanolotsainan'ny Filoha izay sarotra ny hieritreritra hoe hivadihan'ny filoha tampoka, no tompon'ny Microcred, ny Cotisse, ny Ranjatiana ary mbola Total (Oadray! vitan'ny Total tokoa ve ny nanamboatra ny fiantsonan'ny fiara teo Ambodivona sa tsy nisy fifanarahana an'izany?) an'ny Frantsay kosa ny ampahany sasany fa raha tsy izany ianareo dia hino io nofy notantaraiko tsy ho tanteraka io ho marina. Aleo aho hatory amin'izay fa alina ny andro!
25 septambra 2016 amin'ny 00:25